वाटरप्रुफ मेकअप सहजै रिमुभ हुँदैन - अन्तर्वार्ता - नारी
वाटरप्रुफ मेकअप सहजै रिमुभ हुँदैन
विकास पालिखे, प्रबन्ध–निर्देशक, भाष्कर ट्रेकिङ स्पावेक कस्मेटिक्स
वाटरप्रुफ सौन्दर्य प्रसाधन के हो ?
वर्षा होस् वा गर्मी अथवा स्वीमिङ खेल्दा नै किन नहोस् लामो समय टिक्ने सौन्दर्य प्रसाधनलाई वाटरपु्रफ सौन्दर्य प्रसाधन भनिन्छ । यो लङलास्टिङ हुन्छ । पानीले नपखाल्नु, पसिनाले नबिगार्नुका साथै लामो समयसम्म पौडी खेल्दा पनि नबग्नु यसका विशेषता हुन् ।
सन प्रोटेक्सन, लङलास्टिङ, पानी वा पसिनाले नबिगार्नु, नलत्पतिनु तथा लामो समयसम्म आत्मविश्वास कायम राख्नु ।
यो प्राकृतिक मेकअप सहजै रिमुभ हुँदैन । क्लिन्जर अथवा मेकअप रिमुभरले मात्र छाला पूर्णरूपमा सफा हुन्छ ।
नेपालमा वाटरप्रुफ सौन्दर्य प्रसाधनको बजार कस्तो छ ?
यसको माग वृद्धि हुँदै गएको छ । मनसुन तथा गर्मीमा करिब ८० प्रतिशतले वाटरपु्रफ सौन्दर्य प्रसाधन खोज्छन् । विशेषत: टिएजर्सहरू वाटरप्रुफ मस्कारा, आइलाइनर तथा लिपिस्टिक प्रयोग गर्छन् ।
यस्ता प्रसाधन कुन उमेर समूहकाले बढी प्रयोग गर्छन् ?
विशेषत: टिनएजर्स तथा कामकाजी महिलाहरूले जसलाई कम्तीमा ८ घन्टा मेकअप टिकाउनु छ ।
वाटरपु्रफ सौन्दर्य प्रसाधन प्रयोग गर्नुअघि यी कुरा जानिराखौं